Barre Hiiraale “Waxaan maqli jiray dal hebel ayaa leeska musaafuriyaa, hadda waxay ka socotaa Kismaayo” - iftineducation.com
Barre Hiiraale “Waxaan maqli jiray dal hebel ayaa leeska musaafuriyaa, hadda waxay ka socotaa Kismaayo”
iftineducation.com – Wasiirkii hore ee Wasaaradda Gaashaandhiga Somaliya Korneyl Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale), ayaa waxa uu si kulul uu Maamulka Jubbaland uu ugu eedeeyay, inay dhibaato ka wadaan Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Korneyl Barre Aadan Shire, ayaa Maamulka Jubbaland ku dhaliilay inay barakacin ku hayaan dad deegaan ahaan ka soo jeedo Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Magaalada Kismaayo.
“Magaalada Kismaayo waxaa ka taagan waxaan caadi ahayn, dadkii waxaa lagu hayaa dilal joogto ah, si ay uga barakacaan Magaalada.” Ayuu yiri Korneyl Barre Hiiraale.
Korneyl Hiiraale, ayaa yiri “Dadka hantidooda ayaa xoog looga qaadanayaa, guryahooda, boosaskooda iyo bakhaaradooda ganacsi waxaa oo dhan waa laga qaadanayaa. Ninkii diidana si qorsheysan ayaa loo dilayaa.”
Hiiraale waxa uu Dowladda Somaliya uu ugu baaqay inay wax ka qabato xaalada adag ee ka taagan sida uu sheegay Magaalada Kismaayo, isagoo dhanka kalana xusay in leeskala xisaabtami doono waxa ka oogan Kismaayo.
“Dowladda waxaan ka rabnaa inay wax ka qabato dhibaatada uu Axmed Madoobe ka wado Magaalada Kismaayo. Anaga heshiis ayaan uga soo baxnay si xasiloonida looga wada shaqeeyo, wax leeskaga hari doono maaha, waa wax leeskala xisaabtami doono.” Sidaasi waxaa yiri Korneyl Barre Hiiraale.